Guddiga Madax Banaan ee doorashooyinka Qaranka oo dalbaday in laga raro madaxtooyada Soomaaliya – Kalfadhi
Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yareey), Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Banaan ee doorashooyinka Qaranka oo warbaahinta la hadashay ayaa soo jeedisay in laga raro xarunta ay dagan yihiin ee ku taalo gudaha madaxtooyada Soomaaliya.
Xaliima Ismaaciil ayaa sheegtay in ay soo wajahday caqabado badan muddooyinkii ugu dambeeyay waxayna cod dheer ay ku dalbatay in laga raro xarunta gudaha madaxtooyada Soomaaliya maadaama ay yihiin Guddi Madaxbanaan oo ay tahay in ay lakulmaan dhinacyada Soomaalida oo dhan iyo Xisbiyada.
Waxa ay dalabkeeda saldhig uga dhigtay in aan lagu soo booqan karin xafiiskooda oo ay ku adag tahay dadka ay wada shaqeynta kala dhexeyso sidii ay u gaari lahaayeen xaruntan, iyadoo tilmaamtay in arrintaasi ka mid tahay caqabadaha ku horgudban howsha Guddiga.
“Xarun aan ku shaqeysano ma heysano, waa caqabada noogu weyn runtii oo maanta na heysato oo dhibaato ku ah sidii annaga iyo Xisbiyadii iyo bulshadii inteeda kale aan isku arki leheyn meel nabad ah oo aan sahlaneyn gaaristeeda ayaan deganahay” ayey tiri Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Guddoomiyaha Guddiga Madax Banaan ee doorashooyinka Qaranka.
Xaliima Yareey ayaa sheegtay in aysan dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada awood u laheyn in ay iclaamiyaan xilliga ay dalka ka dhacayaan doorashooyinka, iyadoo tilmaamtay howshaas iney qeyb ka tahay shaqada Guddigooda.
“Baarlamaanka ama Xukuumad ama dowlad goboleed, wax shaqo ah ay ku leeyihiin ma jirto iclaaminta doorashooyinka Qaranka, sharci ay u heystaanna ma leh iney cadeeyaan doorashada goortee dhaceyso iyo sidey u dhaceyso” ayey hadalkeeda sii raacisay Xaliimo Ismaaciil Ibtaahim Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Banaan ee doorashooyinka Qaranka.